I-Docu-soap esikhundleni se-blockbuster: 48fps > UVielhuber David
I-Docu-soap esikhundleni se-blockbuster: 48fps12
Amabhayisikobho avame ukurekhodwa futhi adlalwe emuva ngozimele abangama-24 ngomzuzwana - kodwa ifomethi ejwayelekile yeminyaka ecishe ibe ngu-100 “24p” ibonakala ibhibilika. Ukuze uvikele imiphumela emibi engabukeki (isb. Ukuqhuma okunamandla lapho uvusa ikhamera ngejubane eliphakathi) kokuqagelwa kwe-24fps, abantu bebelokhu besebenza ekuphindaphindeni izinga lozimele kozimele abangama-48 ngomzuzwana nangaphezulu isikhathi eside.
Umahluko kufanele wenziwe phakathi kwamacala amabili:
Amafilimu aqoshwa kozimele abangama-24 ngomzuzwana futhi ithelevishini iwashintsha abe ukulandelana kwama-60 Hz Lokhu kwenziwa ngokubizwa kwesithombe okuphakathi, ngosizo lwama-algorithm wesibalo ukuthi isithombe esihlanganisiwe sibalwa phakathi kwezithombe ezimbili zoqobo. Le nqubo ingacishwa kuwo wonke amathelevishini.
Amafilimu aqoshwa ngqo kabili kunenani lozimele (ozimele abangama-48 ngomzuzwana) abuye adlalwe emuva; Lokhu kufaka phakathi, isibonelo, i-"The Hobbit" kaPeter Jackson. UJames Cameron, iphayona hhayi kuphela kubuchwepheshe be-3D cinema, usebenza ngezinga eliphakeme kakhulu lozimele abangama-60 ngomzuzwana: I-Avatar 2 kufanele ifike ngale ndlela ecashile.
Kuzo zombili lezi zimo, kwenzeka umphumela ongajwayelekile, umphumela obizwa nge-soap opera: Ngisho ne-blockbuster ebiza kakhulu ibukeka (okungenani kimi) njengesepha eshibhile esise-la “Gute Zeiten, Schlechte Zeiten”. Angikwazi ukujwayela isigqi esingajwayelekile nakancane: Kubukeka sengathi izithombe zifuna uhlobo lokuxhuma. Iqiniso elibonakala litholakele liphenduka inhlekelele yokuthokozela ifilimu.
Konke lokhu kunjalo emehlweni wombukeli - abanye abantu ngeke baze babone umphumela noma bawukhethe. Kusazobhekwa ukuthi ngabe ubuchwepheshe obusha buzosebenza yini emahholo e-cinema naphambi kosofa ekhaya. Ngifisa ukwazi ukubona ukuthi iningi labathandi bamafilimu bazokwamukela kanjani ukwakhiwa okusha (nangokwe-3D) nokuthi ikusasa lizoletha ini.